ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမည် – Hlataw.com
ဝေယံမိုး က ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသား ဦးလေးက ဦးမျိုးဝင်း ဆုံးပါးသွားတာ နှစ် နှစ်ကျော် သုံး နှစ် နီးပါး ရှိပြီ။ ဦးလေး ဆုံးသွားတော့ သူ့ကို သူ့ အဖေ အမေ အရင်းတွေက လာခေါ်သည့် အခါ တီလေးက မထည့်သူကလည်း မိဘရင်းတွေထက် တီလေးကို ပိုခင်တွယ်သောကြောင့် မလိုက်သွားပဲ တီလေးနှင့် နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်။ သူ နှစ် နှစ် အရွယ် နို့ပြတ်ထဲက ဦးလေးတို့ လင်မယား ထိုစဉ်က ရခါစ သူ့ကို နို့ပြတ်တဲ့ အရွယ်ထဲက ဦးလေးတို့ လင်မယားက အမွေစား အမွေခံနှင့် သူတို့ရဲ့ ဒူးမနာ ဝမ်းမနာ သားအဖြစ် မွေးစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်။ ဦးလေးက အမေ့ မောင် သူကလည်း ငယ်ငယ်ထဲက အတူ နေလာသဖြင့် ဦးလေးနှင့် တီလေးတို့ လင်မယားကို သူ့ အဖေ အမေ အရင်းထက် ပိုခင်တွယ်ပြီး သံယောဇဉ် ရှိပါသည်။ သူ ခွန်နှစ်နှစ်သားလောက်မှာ တီလေးတို့ ကလေးရပြီး ထိုကလေးက အခါလည်လောက်တွင် ချွဲကျပ်၍ ဆုံးပါးသွားခဲ့သည်။
တီလေးနာမည်က ဒေါ်သိမ့်သိမ့်မိုး အသက် သုံးဆယ့်နှစ် တီလေးက သူ့ကို သူမ ဝမ်းနှင့် လွယ်မမွေးရသော်လည်း သား သမီးနဲ့ မခြား ချစ်ရှာခဲ့ပြီး ဦးလေး ဆုံးပါးသွားတဲ့နောက် သူ့ကို ယခင်ထက်ပင် တီလေးက ပိုချစ်ရှာခဲ့သလို ပိုလည်း အလိုလိုက်ခဲ့ပါသည်။ သူ့ကို ချစ်၍လည်း သူ့ နာမည်က အရင် အမေ အဖေ အရင်းတွေ ပေးထားတာ ဝေယံ တီလေးက သူမတို့ မွေးစားပြီးတဲ့နောက် နောက်ဆုံးနာမည်ကို သူမ နာမည်ပါအောင် ဝေယံမိုး ဟု မှည့်ခဲ့တာ ဖြစ်သည်။ ခု စာမေးပွဲပြီး ကျောင်းပိတ်ထား၍ အိမ်မှာပင်။ နေ့လည် နှစ် နာရီလောက် ပျင်း၍ အပြင် ဟိုနား ဒီနား ခဏသွားပြီး သူ အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။ အိမ်ထဲရောက်တော့ ဧည့်ခန်း ဆက်တီတွင် တီလေးနှင့် အတူ အသက် လေးဆယ် လောက်ရှိ လူ တစ်ဦးက သူမ ရှေ့က ခုံမှာ ထိုင်ပြီး စကား ပြောနေတာ တွေ့လိုက်ရသည်။ “သား ဒါက တီလေး မိတ်ဆွေ ကိုအောင်မော်တဲ့” တီလေးက သူနှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည်။
ထိုလူကို သူ ဘု ကြည့်ကြည့်ပြီး တီလေး ဘေးတွင် ထိုင်လိုက်သည်။ တီလေးက ထိုလူနှင့် စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့နေရာ သူ မနာလို ဖြစ်မိပြီး အူတို လာမိလေသည်။ တီလေးက ပခုံးကျော်ရုံ အုံထူနက်မှောင်သော ဆံပင် ဖြောင့်စင်းစင်းလေး မျက်နှာသွယ်ပြီး မျက်ခုံးတန်းထူထူ နှစ်ဖက်အောက်က မျက်နက်ဝန်းအစုံ စင်းသော နှာတံ နှင်းဆီဖူးငုံလို နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနှင့် လှပ ချောမွေ့သည်။ ခေတ်မှီစွာ ဝတ်ဆင်တတ်ပြီး ဒေါက်ပါသည့် ထမီနှင့် ဆွဲသား ဘလောက် အင်းကျီတို့ကို ဝတ်ဆင်တာများပါသည်။ မို့မောက် စူဖြိုးသော ရင် ဆက်တီ ခုံဘေးဖက်သို့ပင် ဂစ်တာရှိတ်ပုံ ကားစွင့်သည့် တင်စိုင်ကြီး နှစ်လုံးက ဘေးနှစ်ဖက်ကို ကားထွက်နေလေသည်။ မို့မောက်စူဖြိုးသော ရင် ကားစွင့်သည့် တင်နှင့် ထိုနှစ်ခုရဲ့ အလည်စပ်ကြားရှိ လှပ ကျော့ရှင်းသေးသွယ်တဲ့ ခါး အရပ် ငါး ပေ ခြောက် ရှိပြီး အရပ်နဲ့ အညီ တီလေးက ခန္ဓာကိုယ် လှပ ကျော့ရှင်းသူ ဖြစ်သည်။
သူလည်း ခု ဆယ့်ရှစ် နှစ် ရှိပြီ ဆိုတော့ သိပါသည်…. တီလေးနှင့် လုပ်ငန်းတူ ပါတနာ ယောင်္ကျားသားများ အိမ်ကို တစ်ခါတစ်ရံ တီလေး ထံ အလုပ်စကား ပြောသလိုဖြင့် လာတတ်ကြသည်။ ခု ဒီဘဲကြီးလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်။ သားတောင် ခု တော်တော် ထွားလာတာပဲနော် သိမ့်သိမ့် ကိုအရင် ဒီကို လာလည်တုန်းက အဲတုန်းက သားက ကလေးပဲ ရှိသေးတယ်” ဟု တီလေးကို ပြောနေရာမှ ထိုလူက သူ့အား ရယ်ပြနေလေသည်။ မိမိကို သားလို ခေါ်နေသဖြင့် ခုနထဲက ထိုလူအား သိပ်မကြည်၍ ဂျစ်ကန်ကန် ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်သည်။ “ကျနော့်ကို သားလို့ လာမခေါ်နဲ့” သူ ဘုတောလိုက်သည်။ ထိုလူလည်း ခဏကြာတော့ တီလေးကို နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်သွားလေသည်။ “သားရယ် ကလေးဆိုးကြီးလိုပဲ ကိုယ့် အိမ်လာတဲ့ ဧည့်သည်ကို အဲလို မပြောရဘူးလေ ပြီးတော့ သူက မကြာခင် သား ဦးလေး ဖြစ်လာတော့မှာ” “ဘာဖြစ်လို့လည်း တီလေး” ဟု သူ မေးလိုက်သည်။
တီလေး ဘဝအတွက်ပေါ့ သား သားကလည်း ခု ဆယ့်ရှစ် ပြည့်ပြီးပြီ ဆိုတော့ နောင်တစ်ချိန် သား မိန်းမ ယူသွားမယ် အဲကျ တီလေးက ဘယ်သူ့ အားသွားကိုးရမလည်း အဲဒါကြောင့် နောက် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားတာပါ ပြီးတော့ သူကလည်း ခုနက အဲဒါ လာကမ်းလှမ်းတာလေ” သူ ဝုန်းခနဲ ထရပ်လိုက်ပြီး သား လုံးဝ သဘောမတူ လက်မခံဘူး တီလေး ဟု ပြောပြီး သူ့ အိပ်ခန်းထဲ ဝင်လာခဲ့လိုက်သည်။ သူ့ ရင်တစ်ခုလုံး ဗြောင်းဆန်နေပြီး နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်နေမိလေသည်။ တစ်နေ့လည်လုံး တီလေးကို စကား မပြောပဲ အိပ်ယာထက်မှာ လှဲပြီး အခန်းအောင်း နေလိုက်သည်။ သူ့ နှလုံးသားထဲမှာ တီလေးက စိုးမိုးနေတာ တစ် နှစ် ကျော်ခဲ့ပြီ။ တီလေးကို သူ ရင်ခုန် စွဲလန်း နေမိပြီး တီလေးက သူ့ရဲ့ အိမ်မက် နတ်သမီးလေး ဖြစ်သလို သူ့ ဘဝလက်တွဲဖေါ် အဖြစ် စိတ်ကူးတွေ မကြာခဏ ယဉ်ခဲ့ဖူးသလို သူမက သူ့ရဲ့ ဂွင်းဘုရင်မလေးလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
သူ ညနေစောင်းတဲ့ အထိ အခန်းထဲက မထွက်ပဲ အခန်းအောင်း နေလိုက်သည်။ “သား ညနေဆာ စားကြမယ်လေ” အခန်း အပြင်က တီလေး အသံကြားတော့ သူ အိပ်ချင်ဟန် ဆောင်နေလိုက်သည်။ သား ညနေ မအိပ်ရဘူးလေကွယ် ဟု ပြောသံနှင့် အတူ အခန်းထဲသို့ တီလေး ဝင်လာပြီး ကုတင်စောင်းမှာ တင်ပါးလွှဲ ထိုင်လိုက်လေသည်။ “သား နေမကောင်းဘူးလား” ပြောပြီး တီလေးက သူ့ နဖူးကို စမ်းလိုက်လေသည်။ သူ ငယ်ငယ်ထဲက ခုထိ သူ့ကို တီလေးက စိုးရိမ် စိတ်ပူတတ်ပြီး အမြဲ အရိပ်လို ကြည့်နေတတ်သူ တီလေး လက်ကို သူ ဖယ်လိုက်သည်။ “တီလေးကို သား ခေါ်တော့ဘူး စိတ်ဆိုးတယ်” ကလေးတုန်းကလို မျက်နှာကြီး စူပုတ်ပြီး နှုတ်ခမ်းထော်၍ ပြောလိုက်သည်။ “သားက နေ့လည်က ကိုအောင်မော် အိမ်ကို လာလည်တာ စိတ်ကောက်နေတာပေါ့ ဟုတ်လား” “ဟုတ်တယ် တီလေး အဲဒါထက် တီလေးက အဲလူကြီးနဲ့ ယူမယ်တဲ့ သားကို လာမခေါ်နဲ့ သား ထမင်း စားဘူး” ပြောပြီး သူ တစ်ဖက် လှည့်လိုက်သည်။
တီလေးက သားကို စပြီး ပြောတာပါကွာ ဒီကလေး သူ့ တီလေးကို အူတိုနေတယ် ဟု ပြောပြီး သူ့ ကိုယ်လုံးကြီးကို သူမ ဖက်သို့ ဆွဲလှည့်လိုက်သည်။ “သားက တကယ် ထင်နေတာ တော်သေးတယ်” “တီလေး နောက် အိမ်ထောင်ပြုချင်မှတော့ သား ဦးလေး ဆုံးပြီးထဲက ပြုမှာပေါ့ တီလေးတို့ တူဝရီး နှစ်ယောက် မိသားစု ဘဝလေးထဲကို ဘေးသူစိမ်း အလာမခံဘူး အဲအတွက် သား စိတ်ချ” တီလေးက ပြောပြီး သူ့ ပါးပြင်ကို ကလေးတုန်းကလို မွှေးကြူ နေလေသည်။ သူလည်း တီလေးရဲ့ လှပ ချောမွေ့သော မျက်နှာလေး အနှံ့ကို တရွှတ်ရွှတ်နှင့် နမ်းရှုံ့လိုက်သည်။ တီလေးက ခုထိ သူ့ကို တခါတရံ နမ်းရှုံ့သလို သူကလည်း သူမကို ဖက်ရက် နမ်းရှုံ့တုန်း ဖြစ်ပါသည်။ ထမင်းသွားစားကြမယ် သား ဟု ပြောပြီး တီလေး ကုတင်အောက် ဆင်းမည် ဟန်ပြင်ရာ သူမ ကိုယ်လေးကို ဖက်၍ သူ့ ရင်ဘတ်ပေါ် ဆွဲချလိုက်သည်….အိုး ဆိုပြီး တီလေး သူ့ ရင်ဘတ်ပေါ် ထပ်ရက်လေး ကျလာသည်။
တီလေးရဲ့ ကိုယ်လုံး အိထွေးထွေးလေးကို စပါးကြီးမြွေကြီး ပတ်သလို ကျစ်နေအောင် ဖက်ထားတာ တီလေးလည်း ရုတ်တရက် ဆိုတော့ မှင်တက်ပြီး မျက်လုံးဝိုင်းလေးနှင့် ကြည့်နေလေ၏။ တီလေးရဲ့ ရင်သားတွေက သူ့ ရင်ဘတ်မှာ ပြားနေအောင် ဖိမိနေပြီး သူတို့ နှစ်ယောက် ရွှေဂဟေဆက်ထားသလို ဖြစ်နေသည်။ နူးညံ့ အိစက်လှသော အတွေ့ အထိ လေးတွေကို သူ ဘယ်လိုမှ မလွန်ဆန်နိုင် လုပ်သင့် မလုပ်သင့်ကို မဆင်ခြင်နိုင်တော့ပဲ တီလေး နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ တီလေး မှင်တက်နေရာမှ သတိ ပြန်ဝင်လာပြီး ရုန်းကန် နေလေ၏။ “ဖူးး ဖလူးး” သူလည်း ခုမှ သတိ ပြန်ဝင်လာပြီး တီလေးကို ဖက်ထားရာက ဖယ်ပေးလိုက်တဲ့ အခါ တီလေးက သူ့အား စိတ်နာသည့် အကြည့်နှင့် ကြည့်၍ ကုတင်အောက်သို့ ဆင်းသွားသည်။ ပြီးတော့ အခန်းပြင်သို့ လှမ်းထွက်သွားခဲ့လေသည်။ ခုနက တီလေးကို မဆင်မခြင်နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်နမ်းပြီး ခုမှ သူ့ကို တီလေး စိတ်နာသွားပြီလားမုန်းတီးသွားပြီးလားဟု စိုးရိမ် ပူပန် နေမိလေသည်။
နောက်နေ့ တစ်နေကုန် တီလေး သူ့ကို ခပ်ခွါခွါ ရှောင်ဖယ်ဖယ် လုပ်နေခဲ့သည်။ မိမိက အမှား လုပ်ထား၍ တီလေးကိုလည်း သူ စကား မပြောရဲ အပြင်သွားလိုက် ဂိမ်းဆိုင်သွားလိုက်နှင့် လုပ်နေခဲ့သည်။ ဟိုညနေက အဖြစ်များ ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်လောက် ကြာခဲ့ပြီ။ တီလေး သူ့ကို ခပ်တန်းတန်း နေခဲ့သည်။ သူ့မှာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပြီး နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်နေမိလေ၏။ အရင်ဆို တီလေးနှင့် သူ စကားပြောလိုက် သူမ အိမ်အလုပ် လုပ်ရင် သူက လိုက်လုပ်ကူလိုက်ဖြင့် နေခဲ့တာ ခုလို သူစိမ်းဆန်ဆန်ကြီး တီလေးက နေတော့ သူ ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်ပါ။ နောက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းလောက် သူ့ အဝတ်အစားများကို ကျောပိုးအိတ်ထဲ ထည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ကြမ်းပေါ်သို့ ဘုတ်ခနဲ ပြစ်ချလိုက်သည်။ ထိုစဉ် အခန်းဝမှ တီလေး ခြေသံ ကြားလိုက်ရပြီး အခန်းထဲ ဝင်လာလေသည်။ “ဒါက ဘယ်လည်း” သူ့ကို တီလေးက ခပ်တည်တည်ဖြင့် မေးသည်။
“သား ချစ်သလို ပြန်မချစ်တဲ့ တီလေးနဲ့ ဝေးရာကို ထွက်သွားမလို့ပါ” ပြောပြီး သူ ကျောပိုးအိတ် ယူ၍ အခန်းဝသို့ လှည့်ထွက်လာခဲ့သည်။ သား မသွားရဘူး ဟု တီလေး ပြောပြီး သူ့ နောက် အမှီလိုက်လာပြီး သူ့ကို နောက်မှ ဖက်ထားလေသည်။ တီလေးကို ခုပဲ ချစ်ခွင့်ပန်မည်။ တကယ်လို့ သူ့ အချစ်ကို တီလေး လက်မခံရင် သူမနဲ့ အဝေးဆုံးကို သူ ထွက်သွားတော့မည် ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးတာနှင့် တီလေး ခဏလေး သားကို ဖယ်ဦး သား မသွားတော့ပါဘူး ဟု ပြောတဲ့ အခါ တီလေးက ဖက်ထားရာမှ ဖယ်ပေးလေသည်။ ကျောပိုးအိတ်ကို အောက်ချလိုက်ပြီး တီလေးဖက် လှည့်ကာ သူမ ရှေ့တွင် ဒူးထောက် ချလိုက်သည်။ “တီလေးကို သား ချစ်မိနေတာ တစ်နှစ် ရှိပါပြီ သား အချစ်ကို လက်ခံပါနော် တီလေး” ပြောပြီး တီလေး လက်လေးကို သူ့ လက်ဖြင့် အုပ်ကိုင်၍ နမ်းလိုက်တဲ့ အခါ တီလေး မျက်နှာလေး ရဲခနဲ ဖြစ်သွားလေသည်။
“အိုး…. သားရယ် မဖြစ်နိုင်တာ သားက ငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတာ လူပျို တီလေးက အဖွားကြီး ဖြစ်နေပါပြီ ရွယ်တူ မိန်းကလေးတွေကိုပဲ ချစ်ပါ” “တီလေးက အဖွားကြီး မဟုတ်ပါဘူး သားမျက်စိထဲမှာ တီလေးက အလွန်ကို လှပတဲ့ သားရဲ့ နတ်သမီးလေး တစ်ပါးပါ သား အချစ်ကို လက်ခံပါနော်” သူ ဇွတ်ပြောပြီး မင်းကုသ ထုံး နှလုံး မူကာ ပပမှ မထူရင် ဒီမောင် ကုသ မထတော့ဘူး ဆိုသည့် ထုံးကို နှလုံး မူထားလိုက်သည်။ “ထတော့” တီလေးက ပြောပြီး သူ့ကို ဆွဲထူလိုက်လေသည်။ တီလေးကို ရည်းစားစကား ပြောတဲ့ ကောင်လေးကို အပြစ်ပေးရမယ် ဟု ပြောပြီး တီလေးက သူမရဲ့ လှပသော နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို သူ့ ပါးစပ်ပေါ်သို့ တင်လိုက်လေသည်။ ဝေယံမိုး ပျော်သွားရပြီး တီလေး နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြွတ်ခနဲ စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ တီလေးက သူမ လျှာလေးကို သူ့ ပါးစပ်ထဲသို့ သွင်းလိုက်လေသည်။ တီလေးရဲ့ လျှာနွေးနွေးလေးကို သူ့ လျှာနှင့် ယစ်ပတ် ထိုးမွှေ့နေလိုက်သည်။
ခဏကြာတော့ တီလေးက စုပ်နမ်းရာမှ ခွါသွားပြီး ပြောတော့ သားက တီလေးကို ချစ်တယ် ဆိုပြီး ဘာလို့ ခုနက တီလေးနဲ့ အဝေးဆုံးကို ထွက်သွားဖို့ လုပ်တာလည်း ဟု မေးလေသည်။ “တီလေးက သားကို အရင်ရက်တွေက စကားမှ မပြောတာ အဲဒီတော့ သား ခံစားရတာပေါ့ အဲဒါကြောင့်ပါ သားကို ချစ်တာပေါ့နော် တီလေး” “ငတုံးလေး မချစ်ပဲ ခုနက သားကို နမ်းမလား ချစ်တယ် ရှက်ထှာဟယ်” ပြောပြီး တီလေး မျက်နှာလေးက ရှက်သွေးလေး ဖြာသွားလေသည်။ သွေးကြောစိမ်းလေးများနှင့် ယှက်ဖြာလျက်ရှိသော တီလေးရဲ့ လည်တိုင်ကျော့လေးကို ပြွတ်ခနဲ စုပ်နမ်းလိုက် လျှာနဲ့ ယက်လိုက် လုပ်နေတာ တီလေး ငြီးသံလေးတွေ ထွက်ပေါ်နေလေ၏။ “အားး အင်းး အိုးး အားး” ခဏကြာတော့ တီလေး ကိုယ်လေးကို အခန်း နံရံဖက်သို့ ဆွဲလှည့်ကာ ကပ်ထားလိုက်သည်။ ပြီးတော့ တီလေးရဲ့ ထမီကို ဖြေ၍ သူမ ခြေထောက် အောက်သို့ ချွတ်ပုံ ချကာ တီလေး ရှေ့တွင် ဒူးထောက် ထိုင်ချလိုက်သည်။
အိမ်မှာနေရင်း ဖြစ်၍ တီလေး ပင်တီ မဝတ်ထားပါ။ ပေါင်တံ ဖွေးတုတ်တုတ်လေး ခွဆုံရှိ အမွေးနက် ပါးပါးလေးများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော တီလေးရဲ့ စောက်ပတ် ဖောင်းဖောင်းကြီးထံ သူ့ မျက်နှာ အပ်လိုက်သည်။ သူ့ လျှာကို စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းဝပေါ် တင်ပြီး အပေါ် အောက် လေး ငါး ဆယ်ခါ ယက်လိုက်သည်။ “အား….. သား….. အား…..” တီးတိုးလေး ငြီးတွားပြီး တီလေး သူ့ ခေါင်းကို ကျစ်နေအောင် ကိုင်ထားလေသည်။ စောက်ပတ် အကွဲကြောင်း တလျှောက် အပေါ် အောက် ဘေး ဘယ် ညာကို ယက်ပြီး အစိလေးကို လျှာနှင့် ထိုးကလော်၍ စောက်ပတ်ကို လျှာနှင့် လိုးပေး နေလိုက်သည်။ “အား…. သား…. အင်း…. အား…. ဟင့်….. ဟင့်” တီလေး လိုချင်ပြီ ဆိုတာ သိလိုက်ရသဖြင့် သူ့ လျှာပေါ် တစက်စက်နဲ့ ယိုစိမ့်ကျလာသော တီလေး စောက်ရည်ကြည်လေးများကို အရသာခံပြီး ဂွတ်ခနဲ မြိုချလိုက်သည်။ ထကာ သူ့ ပုဆိုးကို အောက်သို့ ချွတ်ပုံချလိုက်ပြီး တီလေးရဲ့ ခြေတစ်ဖက်ကို မ၍ သူ့ ခါးတွင် ချိတ်လိုက်သည်။
သူ့ ဒူးတစ်ဖက်ကို ကွေးကာ တဇတ်ဇတ်နှင့် တုန်မတ်နေသော သူ့ လီးကို ဆုပ်ကိုင်၍ တီလေး စောက်ပတ်ဝတွင် တေ့ပြီး ခါးဆန့်လိုက်သည်။ စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားလေး နှစ်လွှာကို ထိုးခွဲ၍ သူ့ လီးက ဂွမ်းသားလေးလို နူးညံ့ အိစက်လှသော တီလေးရဲ့ စောက်ပတ်ထဲသို့ တအိအိနှင့် ဝင်ရောက်သွားခဲ့လေသည်။ “အား…… အား…..” တီလေး တီးတိုးလေး ငြီးပြီး သူ့ကို ဖက်ထားလေသည်။လှပချောမွေ့သော တီလေးရဲ့ မျက်နှာလေးကို ကြည့်၍ တဖုံးဖုံးနှင့် သူ ဆောင့်လိုး နေသလို တီလေးကလည်း သူမ စောက်ပတ် အတွင်းသားတွေနဲ့ သူ့ လီးကို စုပ်ညှစ် နေလေသည်။ သား လိုးတာ ကောင်းလား သူ လိုးနေရာမှ မေးလိုက်တဲ့ အခါ အားး သားရယ် တီလေးကို ဘယ်လိုကြီး မေးတာလည်း ဟု ပြောလေသည်။ သားတော့ ကောင်းတယ် တီလေးကို လိုးလို့ ကောင်းတယ် အားး သူ ပြောတဲ့ အခါ အားး တီလေးလည်း ကောင်းတယ် လိုး သား အားး ဟု ပြောပြီး တီလေးရဲ့ ရမ္မက်ထန်သည့် မျက်နှာလေးက ပန်းသီးလို ပန်းရောင် သမ်းနေလေ၏။
ခဏကြာတော့ တီလေး စောက်ပတ်ထဲသို့ သူ့ သုတ်ရည်ပူတွေ ဖြောခနဲ ဖြောခနဲ ပန်းထွက်သွားတဲ့ အခါ ဟင့်ခနဲ တီလေး ငြီးသံလေး ထွက်လာပြီး သူမ ကိုယ်လေး တဆတ်ဆတ်နှင့် တုန်ခါသွားလေသည်။ သူနှင့် တီလေး ပြီးသွားပေမယ့် တီလေး စောက်ပတ်ထဲက သူ့ လီးကို မထုတ်သေးပဲ ကာမ အရသာကို ခံစား နေလိုက်ကြသည်။ နားနေရာမှ တီလေးရဲ့ ပါးပြင်လေးကို နမ်းပြီး သူမ ဘလောက်စ် အင်းကျီကို သူ အပေါ် မလိုက်တဲ့ အခါ တီလေးက လက်မြှောက်ပေးထားလေသည်။ တီလေး ခေါင်းပေါ်မှ သူမ အင်းကျီကို ကျော်၍ သူ ချွတ်လိုက်ပြီး ဘရာစီယာ အဖြူ ရောင်ပေါ်က တီလေး ရင်သားတွေကို သူ အုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ သား ခဏ ဆိုပြီး တီလေးက သူမ ကျောနောက်ကို လက်သွင်းကာ ဂျိပ်ဖြုတ်၍ ဘရာစီယာ ချွတ်လိုက်သည်။ ဖွေးခနဲ ထွက်ပေါ်လာသော တီလေးရဲ့ မို့မောက် စူဖြိုးသည့် နို့နှစ်လုံးကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး စို့လိုက်သည်။ ခဏကြာတော့ နို့စို့ရာက တော်ပြီး သူ့ လီးကို ဆွဲထုတ်မည် ပြင်ရာ နေဦး သား အဲတိုင်းလေး ထည့်ပေးထားဦး ဟု တီလေးက ပြောသည်။
သူ့ လီးကို မထုတ်သေးပဲ သားတို့ သာယာတဲ့ ချစ်ခရီးလမ်းကို တစ်သက်လုံး လျှောက်လှမ်းကြမယ်နော် တီလေး သူ ပြောတဲ့ အခါ အင်းပေါ့ သားရဲ့ တီလေးတို့ သာယာတဲ့ ချစ်ခရီးကို တစ်သက်လုံး လျှောက်လှမ်းကြမယ် ဟု ပြောသည်။ သား ထပ်လိုးဦးမယ်နော် တီလေး သူ ပြောတဲ့ အခါ ပြောနေရသေးလား ခုကစပြီး တီလေးက သားကို ပိုင်သလို သားကလည်း တီလေးကို ပိုင်သွားပါပြီ တီလေးကို လိုးပေးတော့ ဟု ပြောလေသည်။ တီလေး စောက်ပတ်ထဲရှိ သူ့ လီးကလည်း နောက်တစ်ခါ ထပ်လိုးရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီ။ တီလေး ကိုယ်လေးကို စွေ့ခနဲ သူ မလိုက်တဲ့ အခါ တီလေးက သူ့ခါးမှာ သူမ ခြေနှစ်ဖက်ကို ချိတ်၍ ဟီးလေး ခိုထားလေသည်။ ကုတင်နားသို့ တီလေးကို ချီလာပြီး ကုတင်ပေါ် တက်ကာ အိပ်ယာထက်သို့ ညင်သာစွာ ချလိုက်ပြီး တီလေး နို့နှစ်လုံးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူ့ လီးကို နောက်သို့ ဆွဲထုတ်၍ တီလေး စောက်ပတ်ထဲ ဆောင့်လိုး သွင်းလိုက်သည်။ တီလေး နို့နှစ်လုံးကို ဆုပ်နှယ်ပြီး ဆောင့်လိုး နေလိုက်သည် “အား….. လင်လေးရယ်”….. ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမည် …..ပြီးပါပြီ။